Faritra Alaotra : zara raha hisy vary amin’ity taom-pambolena ity | NewsMada
Faritra Alaotra : zara raha hisy vary amin’ity taom-pambolena ity
Mizaka ny vokatry ny haintany ny any amin’ny faritra Alaotra amin’izao fotoana izao. Alaotra, anisan’ny sompitra lehibe eto Madagasikara, saingy mandalo fotoan-tsarotra ankehitriny noho ny tsy fahampian-drano. Vokatra kely sisa tavela tamin’ny taom-pamokarana farany, 2015-2016, any amin’ny tokantranon’ireo mpamboly. Ny olana anefa, raha manatitra mivarotra ny vokatra any amin’ny sompitra iombonana ny mpamboly, midika izany fa manam-bola izy ireo ary tonga manafika avy hatrany ny jiolahy. Noho ny tahotra ny asan-jiolahy fa tsy noho ny fanafenana tahiry ny antony mampiakatra vidim-bary any Alaotra ankehitriny. 500 Ar ny kapoakan’ny vary fotsy any am-potony !
Zara raha hisy vary amin’ity taom-pambolena manaraka ity. Maina tanteraka ny tanimbary, tsy ampy ny rano manondraka ireo velaran-tany avy any Sahabe, Anony, Sahamaloto. Mihatototra ny farihin’Alaotra, efa misy faritra azo ilalaovam-baolina. Mibaribary ankehitriny ny vokatry ny dorotanety sy ny doro zetra miaro ny farihy. Manoloana izany, nandalo tany Amparafaravola sy Ambatondrazaka ny minisitry ny Fambolena sy ny fiompiana, Rivo Rakotovao, nijery vahaolana hiatrehana izao fahavoazana ankehitriny manapotika ny fambolena izao.
Nanapa-kevitra ny minisitra hanao drafi-panajariana vaovao, hiarahana mikaon-doha amin’ny mpamboly sy ny teknisianina. Drafi-panajariana, toy ny natao tamin’ny Somalac nandritra ny Repoblika faharoa. Koa amin’ny fiandohan’ny volana febroary ho avy izao, hisy atrikasa hatao any an-toerana, handrafetana izany drafi-panajariana vaovao izany. Anisan’ny hodinihina ny olana momba ny fananan-tany, dorotanety sy ny dorozetra. Efa misy vahaolana naroson’ny fokonolona ny amin’ny tokony hananganana tohodrano hisarihana rano, araka ny fotoana ilàna azy, miainga avy any amin’ireo renirano mamatsy ny farihin’Alaotra ireo. Ho vita ihany ny atrikasa, hivoahan’ny drafi-panajariana vaovao fa ny tena andrasana ny fanatanterahana izay ho tapaka eo, izay miankina amin’ny fisian’ny vola.